क्वारिन्टिन डायरी Archives - HongKong Khabar
रिमन लिम्बु https://youtu.be/FflEFVFzo0E रिमन लिम्बूसंगको वार्ता सुन्न माथि क्लिक गर्नहोस १३ फेब्रुअरी २०२२ साल आइतबार । सधैं झैं मेरो हाइकिङ जाने दिन। बिहान ६.३० बजे घडीको अलार्मले मलाई उठने आदेश दियो । बिहानकाे दैनिक काम सकाएर ९.३० बजे साथीलाई अस्टिन स्टेसनमा भेटने वाचा अनुरूप म रेल स्टेसन पुगें । साथीसंग पाइन एप्पल माउन्टेन जाने सल्लाह भएकोले रेल चढेर सिउ होङ पुगियाे। त्यहाँको सौ...
शुक्रबार, फाल्गुण २०, २०७८
हङकङ कोभिड-१९ भोज काण्ड- नेत्री क्यारी लामद्वारा १३ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी निलम्बन
क्रान्ति सुब्बा हङकङकि कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले १३ जना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूलाई आफ्नो पदिय दायित्वबाट निलम्बन गरेकी छिन। जनवरी ३ तारिख सोमबार कोभिड-१९ प्रभावित जन्मदिनको पार्टीमा सहभागी भएका यी अधिकारीहरूको आचरण अनुसन्धान गर्न पनि उनले आदेश दिएकी छिन। उक्त भोजमा उपस्थित १७० पाहुनामध्ये दुई जनामा ​​कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो ।दुई जना पाहुनामा कोभिड-१९ पोजेटिभ...
सोमबार, पौष २६, २०७८
कोभिड-१९पार्टी स्क्याण्डल:हङकङका शिर्ष नेता,कर्मचारी सहित करिब २०० जना क्वारेन्टाइनमा
क्रान्ति सुब्बा ६ जनवरी २०२२ बर्थ डे पार्टी मिति : जनवरी ३ तारीख सोमबार २०२२समय : बेलुकी ६ बजेस्थान :रिजर्भा इबेरिका तपस बार एन्ड रेस्टुरेन्ट , कजवे बे सेन्टर , वान चाइ।जन्म दिन व्यक्तित्व : विटम्यान हुङ वाइ- म्यान, प्रमुख संपर्क अधिकृत सेन्जेन,छ्यान्हाइ (हङकङ प्रतिनिधि ) आयातित ओमिक्रोन बोकेका एक क्याथे प्यासिफिकका क्रु मेम्बरले तीन दिन गृह मै बिताउनु पर्ने आइसोलेसनको नियम...
आइतबार, पौष २५, २०७८
हङकङको एउटा बन्द कोठामा २१ दिन
अबि चन्द्र इङनाम परिवार अथवा श्रीमती, छोराछोरी उतै छन। अनि साथीभाई इष्ट मित्र पनि धेरै उतै छन । सुखसुबिधा ,पेशा ,जागिर, ब्यापार ,ब्यवसाय उतै छन। तर पनि आफनो मातृभूमि छाडेर बिदेश यात्राको कुरा उठेपछि कता कता मनमा खिन्नताको आत्मानुभूति हुने गर्दछ । यो सबैलाई हुने अनुभूति होकि मलाई मात्र ? आफैलाई अनुत्तरित प्रश्न गर्छु । देख्छु सबै खुसीसाथ आफनो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरि रहेको ।...
सोमबार, कार्तिक २९, २०७८
सपनाको सपनामा देखिएको विपना
श्याम इङनाम आज यो गुप्तवासको अन्तिम दिन। यो २१ दिने बसाइको संघारमा आइपुग्दा मन एउटा मिश्रित भावनामा रुमल्लिरहेकोछ। लाग्छ जीवन बिभिन्न घुम्तीहरुको संगम रहेछ। कति घुम्तीहरु चाहनाका, कति बाध्यताका। ति तमाम घुम्तीहरुलाई पार गर्दै जानुको विकल्प रहेनछ। रुनलाई मानिससंग दुखको सगरमाथा कम हुन्छ तर खुशी हुन ममताले भरिएको एउटा निस्वार्थ मुस्कान नै काफी हुने रहेछ। आमाको सघन उपचार पछि वहाँको स्वास्...
हङकङ क्वारेन्टाइनका केहि अनुभव
श्याम इङनाम 20 Jan 2021 Day #2 बिहान अलिक अबेर मात्र निन्द्राबाट आँखा खुल्यो । मोबाइल हेर्दा बिहानको ८:३० बज्न भ्याईसकेको रहेछ। मोबाइल हेर्न भन्दा पहिला रुमको भित्ता वरिपरी आँखाले भित्ते घडी खोजेकै हो,आफ्नै नारि समेत घडीरहित थियोे । सोचें ! समय धेरै परिवर्तन भैसक्यो, तेही परिवर्तित समय हेर्न अब घडी पुरातन भैसेकेको भान भयो। कस्तो समय आयो ? घडीको के कुरा ? मान्छे देखि मान्छे डराउँदै हिंड...
मंगलबार, माघ २०, २०७७
एउटा नरोजेको यात्रा : हङकङ क्वारेन्टाइन
- सुर्य सिङ्गक लिम्बु त्यो दुर्घटना ! हङकङको निर्माण क्षेत्रमा पर्ने काम मध्ये एउटा एकदम गाह्रो काम प्यानलको कामलाई मानिन्छ । यहि कामबाट गुजारा चलिरहेको अवस्थामा हामीसंग काम गर्ने एकजना दाई दुर्घटनामा पर्नुभयो । दुर्घटनामा दाईको दुईवटा करङ भाचिएको रहेछ भनेर पछि दाईसंग फोनमा कुराकानीको क्रममा थाहा भयो । हङकङमा कुनै पनि निर्माण क्षेत्रमा दुर्घटना भएको खण्डमा एक वा दुईदिन काम बन्...
कोभिड -१९ महामारीको बेला हङकङ फर्किदा
- श्याम इङनाम हङकङ उड्नु पुर्व आमालाई मेडिसिटिबाट घर ल्याई सकेपछि हामी सबैमा खुशीको लहर छायो। अनुहारको अध्यारोपन विस्थापित हुदै गयो। सबैको मुहारमा हाँसोको फोहोरा छुट्न थाल्यो । संसारमा जन्मदिने आमा र बाबाको स्थान सर्वोच्च र अतुलनिय हुदोरहेछ। चाउरिएको मुहारमा मन्द मुस्कान देख्दा संसार जितेझैं लाग्ने रहेछ । घरको सौहार्द वातावरण अनि वरीपरि छोरा छोरीहरुको स्पर्शले होला आमाको स्वास्थ्यको प्...